ⓘ ဂျိုကို ဝီဒိုဒို
ဂျိုကို ဝီဒိုဒို သည် နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်ကာ အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၏ သတ္တမမြောက်နှင့် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော သမ္မတဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်းက သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်ခံခဲ့ရပြီး အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတများတွင် နိုင်ငံရေး အထက်တန်းလွှာမိသားစု သို့မဟုတ် စစ်တပ်နောက်ခံမဟုတ်သော ပထမဆုံးသမ္မတ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူသည် ယခင်က ဆူရာခတ်တာမြို့တော်ဝန်အဖြစ် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အထိ၊ ဂျာကာတာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
သူသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဆူရာခတ်တာမြို့တော်ဝန်အဖြစ်ဖြင့် နိုင်ငံအတွင်း ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့သည်။ PDI-Pပါတီ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ၂၀၁၂ ဂျာကာတာမြို့ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် ဘဆူကီ တာဟာဂျာ ပူနာမာ့ နှင့်အတူ ဝင်ရောက်အရွေးခံခဲ့ပြီး လက်ရှိ အုပ်ချုပ်သူ ဖောက်ဇီ ဘိုဝိုကို အနိုင်ရခဲ့သည်။ အုပ်ချုပ်သူအဖြစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ဂျာကာတာ၏ အုပ်ချုပ်ရေးကို ပိုမို အားသစ်လောင်းခဲ့သည်။ မြို့၏ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုများကို လျှော့ချကာ ဗျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ မြို့နေလူထုကျန်းမာရေး အတွက် စောင့်ရှောက်မှု၊ ရေကြီးမှုကို လျှော့ချရန် မြို့၏ အဓိကမြစ်ကြီးကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မြို့၏မြေအောက်ရထားစနစ်ကို လုံလောက်စွာ တည်ဆောက်ခြင်း စသည်တို့ ပါဝင်သော မြို့နေလူထု၏ သက်ရှည်ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်တစ်ခုကိုလည်း တင်သွင်းခဲ့သည်။
1.1. အစောပိုင်းဘဝ ပညာရေးနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
2.1. နိုင်ငံရေးသမား ဆူရတ်ခါတာ မြို့တော်ဝန်
2.2. နိုင်ငံရေးသမား ဂျာကာတာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူ
3.1. သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ ၂၀၁၄
မီဂါဝတီသည် သူ့ပါတီ၏ သမ္မတလောင်းကို ဂျိုကို ဝီဒိုဒိုအား ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ စစ်တမ်းများ၏ ရလဒ်များကို လျင်မြန်စွာ တွက်ချက်ပြီးနောက် ဇူလိုင် ၉ ရက်နေ့တွင် ဂျိုကို ဝီဒိုဒိုက အနိုင်ရကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ သို့သော် ပြိုင်ဖက်ဖြစ်သူ ပရာဘိုဝို ဆူဘီရာနာကလည်း သူအနိုင်ရကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြန်ရာ ပြည်သူများအကြား ရှုပ်ထွေးစေခဲ့သည်။ ဇူလိုင် ၂၂ ရက်နေ့ တရားဝင် မဲရလဒ်များ မထွက်မီ နာရီပိုင်း အလိုတွင် ပရာဘိုဝိုမှ နှုတ်ထွက်သွားသည်။ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ဂျိုကို ဝီဒိုဒိုအား ၅၃.၁၅% ၇၀, ၉၉၇, ၈၅၉၊ ပရာဘိုဝိုအား ၄၆.၈၅% ၆၂, ၅၇၆, ၄၄၄ဖြင့် ကြေညာခဲ့သည်။
3.2. သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ ၂၀၁၉
4. နိုင်ငံတော် သမ္မတ
ယခင်သမ္မတ ဆူဆီလိုက ဖော်ပြလျက်တစ်ခုတွင် မိတ်ဆွေတစ်ထောင် ရန်သူမရှိ ဟု ပြောခဲ့သည်။ဂျိုကို ဝီဒိုဒိုက နိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံသားတို့၏ အချုပ်အခြာကို အလေးပေးသည်။
5. မိသားစုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
ဂျိုကို ဝီဒိုဒိုသည် သူ့၏ ဇနီး အရီနာ ဂျိုကို ဝီဒိုဒိုကို ၁၉၈၆ တွင် လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ကလေး ၃ ယောက်ရရှိခဲ့သည်။ ဂျိုကို ဝီဒိုဒိုကို မွတ်စလင်ဖြစ်သော်လည်း သူ၏အပြင်လောကကို အမြင်ကျယ်သူဟု ဖော်ပြကြသည်။ ၂၀၁၃တွင် ဂျိုကိုဝီ ဟု အမည်ပေးထားသော သူ၏ငယ်ဘဝအကြောင်း ရိုက်ကူးထားသည့် ဇာတ်ကား ထွက်ရှိခဲ့သည်။
The Most Esteemed Family Order of Brunei DK – ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၅
Wikipedia: ဂျိုကို ဝီဒိုဒို